KIIMIKO "MARBLE": DABIICIGA IYO QASAAROOYINKA KALA DUWAN, BEERASHADA IYO DARYEELKA - GEEDKA NADDIGA
Noocyada "Marble" waa furaha ugu caansan ee xarigkeena. Waxay leedahay wax-soosaarkooda sarreysa, soo-saarka miraha casiir leh, si aad u badan oo bannaanka u doonayaan inay koraan geed geedka beertooda. Khatarta hawlgalkani waa mid weyn - geedku ma kala duwanaan la'aanta jiilaalka gaar ahaaneed, laakiin leh taxaddar taxadar leh, ganacsigu wuxuu noqonayaa guul weyn.
Noocyo kala duwan oo ah "Marble"
Kala duwanaansho waxaa laga helay USSR sannadkii 1965 oo ah saldhigga barxada dhulka. Ciyaalkiisu waxay ahaayeen noocyo "Forest Beauty" iyo "Jiilaalka Beer Michurina". Astaamaha jilicsanaanta jiilaalka "Marble" kuma raaxaysato. Geedka mar walba ma u dulqaadanayo dhaxan. Xilliga guga ayaa si gaar ah halis u ah isaga marka ubaxyada oo dhan ay barafoobaan.
Wuxuu koraa illaa afar mitir oo dherer ah, kaas oo sameeynaya taaj sarre ah oo dhexdhexaad ah. Caleemaha cusub waxay leeyihiin midab cas oo casaan ah, laakiin waxaa la sameeyaa aan firfircooneyn. Laamaha qaangaarka ah ayaa kora, xoogaa ku dhow. Kaliya ee laamaha ku jira da'da laba ama saddex sano ayaa midho u dhali. Jilifka geedka ee geedka-cagaar.
Geedka geedka waxaa lagu daboolay wax yar, oo yar yar oo la dareemi karo. Laamuhu waxay daboolaan brown, saddex xagal, wax yar oo xoqan dhinaca dhinaca kelyaha. Oo iyaga ka mid ah caleemaha cagaaran foomka ka baxsan. Waxay ka kooban yihiin qadar dhexdhexaad ah, petioles aan la garanaynin, saldhig kuxirnaa iyo geeso caan ah.
Ubax of pear-qaabeeya pear, caddaan, double, aan ka badnayn 3 cm dhexroor. Ubaxa waxaa lagu sameeyay dhiryo yaryar oo xiran, kuwaas oo ay ku jiraan fareeb isku mid ah oo leh anteros. One inflorescence waxaa ku jira wax ka badan siddeed ubax. Waxay horay u muuqdaan noocyo kale.
Miraha waxay koraan qiyaas dhexdhexaad ah oo miisaankeedu yahay 170 g oo ah foomka saxda ah. Maqaarku waa mid qaro weyn leh, jilicsan, jidhku waa cadaan cadaan ah, marmarka qaarkood kareemka. Diirka waa dahab-cagaaran oo leh caaro casaan-cawl leh, oo loogu magac daray. The pear waxaa lagu hayaa celcelis ahaan qiyaasta miraha miraha xooggan, miraha midab khafiif ah ayaa ku jira qolalka qiyaasta dhexdhexaadka ah.
Ma taqaanaa? Kalluunka "Marble" waxaa ka mid ah cuntada sonkorowga, iyo sidoo kale cuntada cuntada loogu talagalay dadka loogu talagalay miisaanka lumay. Casiir iyo cadaan kareysa, inkastoo macaan, aysan keenin cunto xumo. Laakiin macaanku wuxuu siinayaa fructose, kaas oo hagaajiya beeryarka, cusbooneysiinta iyo tones jirka.
Dhoofinta pear "Marble" uma baahna waxqabadyo dheeri ah - waxaa si fiican u saameyn kara iskeed. Waxaa lagula talinayaa in ay ku beeri doonto noocyada kala duwan ee "Lada", "Tatyana", "Chizhovskaya", kuwaas oo ah pollinators taas oo leh sifooyinka sare ee adag jiilaalka iyo adkaysiga. Kala duwanaansho "Marble" ayaa sidoo kale waa pollinator iyaga.
Beerku wuxuu leeyahay dhadhan aad u fiican, soo bandhigid sare, is-bacriminta iyo gaadiidka wanaagsan. Faa'iidooyinka pear "Marble" ayaa sidoo kale ku jira qaabka kiimikada ee miro. 100 g oo ah saxarada ayaa ku jira 6.5 mg oo fitamiin C. Waxay ka kooban tahay 9% sonkorta iyo 0.1% aashitada - tani waxay siisaa miro badan macaan. Hase yeeshee, faa'iidooyinkeeda oo dhan, noocyada kala duwan waxay leeyihiin tiro khasaare. Sidaa darteed, wuxuu leeyahay celcelis ahaan barafka celcelis ahaan, gaar ahaan xasaasi ah isbedelka heerkulka isbeddelka. Marka dhaxanta guga ay ku dhacaan ubax dhacdo, suuragalnimada in dayrta dambe ee miro ayaa sidoo kale sarreeya. Geed kale ma u dulqaadanayo abaar iyo hallowday.
Hababka beeritaanka noocyo jajab ah "Marble"
Inkasta oo ay iska caabbiyaan barafka hooseeya, noocyada kala duwan ayaa loo arkaa aan qabyo ahayn. Sidee bay u wanaagsan tahay in geedku koraan oo u koro wuxuu ku tiirsanaan doonaa meesha saxda ah ee beerto, adeecida dhaqanka beeraha, walxaha beerto iyo caafimaad leh.
Sida loo doorto sapling
Waxaa lagula talinayaa in lagu iibiyo geedo dukaamo khaas ah, laakiin waxay u fiicnaan doontaa in ay la xiriiraan xannaanooyinka khudaarta ah. Sidaas kalsooni dheeraad ah si aad u iibsato alaab caafimaad leh oo waxtar leh. Xulashada geedo geedo ah "Marble" waa in la fuliyaa si waafaqsan sharciyada soo socda:
Geedo waa in aysan aheyn mid ka weyn labo sano, haddii kale waxay ka danbeeyaan horumarka. The weyn dukaanka, nidaamka xidid weyn, laakiin marka qashin, dhirta qaangaarka ayaa lumisa qayb weyn oo ka mid ah marka la barbar dhigo mid da 'yar. Iyo yar ee xididdada, ka sii xun sii nafaqada ee seedling ah.
Iska ilaali xididada, kuwaas oo aan laheyn dhaawac, laakiin waa in si fiican loo horumariyo oo caafimaad leh. Xiddigaha ugu muhiimsan waa in ay ahaadaan ugu yaraan saddex dherer oo ugu yaraan 25 cm. Waxaa lagu talinayaa in la qaato sapling leh clod dhuleed oo ka ilaaliya xididada yar yar. Intaa waxaa dheer, in gobolka this, seedling waxaa lagu beeray karaa inta lagu jiro xilli dhan koraya.
Haddii aad qaadato warshad bienaal ah, dooro mid taajirkiisu ka kooban yahay saddex laamood ugu yaraan. Wixii geedo sanadle ah, xaaladda this ma aha mid muhiim ah.
Hubi in qolofku aanu lahayn waxyeelo, dildilaaca oo waa siman yahay.
Sida caadiga ah "Marble" pear beeray guga ka dib markii dhaxan ugu dambeeyey. Xasuuso in dhirta ay aad u nugul tahay. Marka la eego wakhtiga soo degitaanka wuxuu dhacaa tobanka sano ee ugu horreeya May. Waxaa muhiim ah in la helo biyo badan oo dhir ah oo joogto ah.
Mermirdhada ciriiriga ah ee la gooyey "Marble" iyo dayrta. Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in la doorto wakhtiga bil ka hor inta aan la helin heerkulka hooseeya iyo dabaylo qabooba ay bilaabaan inay ku dhuftaan. Sida caadiga ah, dhirta waxaa la beeray qeybtii hore ee Oktoobar. Waqtigaan, ciidda ma laha waqti si ay u qaboojiso, iyo xididdada si degdeg ah u qaadan xidid iyo koraan xoog.
Kalluun kasta (ma aha oo kaliya noocyada kala duwan) ayaa aad u doonaya iftiinka. Sidaa darteed, for geedo beerto, waa lagama maarmaan in la doorto aagga ugu ifaya leh ugu yaraan shoog. Xilliga qaboobaha, geedka uma dulqaadanayo dabaylaha xooggan, sidaas darteed haddii aad leedahay bowd goobta, waxaa fiican in la beero pear ku dhow, ilaa 3-4 mitir.
Waa muhiim! Geedkuna wuxuu jecel yahay qoyaan, laakiin ma u dulqaadanayo biyaha taagan! Horay u sii daryeeli in biyaha ka dib waraabinta badani aysan joogsanayn.
Doorashada meel loo dego, fiiro gaar ah u yeelo heerka dhacdada dhulka. Waa inay ahaataa mid u dhaw in ka badan 2.5 mitir dusha sare. Marka xigta geedo, qashin khaas ah waa in la qodayaa, taas oo u adeegi doonta nidaam dheecaan ah marka waraabinta pear. Haddii ay jirto suurtogalnimo ah in la joojiyo biyaha goobta, waxaa wanaagsan in la saadaaliyo dhirta dhirta, iyo xataa si ka fiican - ku beeraan buur buureed.
Ciidda pear waxaa lagu xushay loamy, nafaqo iyo dabacsan. Dabadeedna waxaad ka helaysaa midho fiican. Ciidda dhoobada ah, dhoobada iyo carrada ciidda ayaa horay loo deyn jiray, iyo xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo humus, compost ama peat sida bacriminta.
Ka dib markaad daryeesho dhammaan marxaladaha diyaarinta, waxaad bilaabi kartaa geedo beerto. Waxay raacaysaa qaabkan:
1. Si fiican u kariya. Waa in lagu qodaa hal toddobaad ama laba ka hor intaan la beeri. Celcelis ahaan, loogu talagalay seedling aan ka weyneyn laba sano, waa inay ahaataa qiyaastii 60 cm dhexroor iyo 80 cm oo qoto dheer. Laakiin guud ahaan, waxa lagu soo celiyaa xajmiga miisaanka dhulka hoostiisa oo leh xididada.
Waa muhiim! Marka la sameynayo ceelasha beerto, carrada waxaa lagu qoday lakabyo, oo dhigaya lakabyo gedis gaar ah. Tani waxay muhiim u tahay bacriminta dheeraad ah.
2. Qaadista bacriminta. Lakabka ugu sarreeya waa inuu ku jiraa macdanta iyo bacrimiyayaasha. Xaaladda kowaad, qaado 150 g ash alwaax iyo superfosphate, iyo sidoo kale 40 g of potassium. In labaad - 7-10 kg ee humus. Haddii ciidda u baahan tahay in la nadiifiyo, isku dar ah walxaha walnut, 300 g oo ah xumbo iyo gasacado yaryar ayaa lagu shubay hoose ee godadka bartamaha. 3. Taageerida dhirta. Si yar oo ka baxsan bartamaha daloolka, saamigu ma aha wax ka yar 130 cm sare iyo qiyaastii 5 cm dhexdhexaad ah. 4. Diyaarso seedling. Dib u eeg ka hor intaan la dhicin. Haddii waxyeello halis ah la helo, gaar ahaan xididdada geedka, iyaga ku gooyo qalab fiiqan. Haddii xididada ay leeyihiin waqti si ay u qalalaan, ka hor intaan la beeri, waxay qoynayaan qiyaastii 5 ilaa 8 daqiiqadood biyaha lagu qaso dhoobo. Laga soo bilaabo seedling leh nidaam xidid furan, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro ilaa 80% caleemaha.
5. geedo beerto. Warshadu waxay ku taala bartamaha daloolka waxayna ku rusheeyeen carrada pre-bacriminta. Sida dhulka ku shubtay, seedling yar yar ayaa la ruxruxay oo kor u kacay. Hubi in qoorta xididku ku yaal 3 ilaa 5 cm oo dhulka kor ku xusan.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku beeri geedo dhowr ah ama koox, ka sii hor mar sida ay kuugu dhici doonaan goobta. Masaafada u dhexeysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 4 mitir haddii dhirta ay yihiin heer dhexdhexaad ah. Wixii xoog leh, masaafadaasi waa horey 6 mitir. Inta u dhaxeysa dhirta waxaa loo oggol yahay in lagu xoqo geedo ama khudaar.
6. Samee daloolka. Marka ceelku si buuxda u buuxsamo, waa mid is dulfuulaya, seedling waxaa lagu xiraa jeexa qoryaha hore, iyo godad waraabin ah ayaa lagu sameeyaa agagaarka warshadaha leh hoe.
7. Nadiifinta habboon, mulching. Ka dib markii laga beerto qoyaanka la sameeyay waxaa lagama maarmaan ah in lagu daadiyo ugu yaraan laba baaldiyo oo biyo ah. Marka waxaa la nuugo dhulka, waxaa la mulched leh caleemo dhacday, sida balka, caws. Marka guga laga beerto geedo badani waa inay sii socotaa bil gudaheed oo leh dhowr jeer oo isbuucii ah.
Noocyada daryeelka ee noocyo ku'saabsan "Marble"
Haddii aad rabto in aad hesho miro badan oo dhadhan sare leh dhadhan sare, waxaad u baahan tahay wakhti aad ku fuliso waxqabadyada daryeelka dhirta. Madaxa iyaga ka mid ah waa waraabinta, manjooyin iyo bacriminta.
Kala duwanaanta noocaas ah uma dulqaadanayso abaar. Sida ugu dhakhsaha badan ee geedku u maqan yahay biyo, waxay ka tagtaa miraha aan qaangaarka aheyn, waxay yareysaa dhalidda. Isla mar ahaantaana, ma aha wax xasaasi ah in xad dhaafka ah qoyaan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga fekero ka badan pears waraabiyo hore.
Habka ugu fiican ee waraabka waa rusheeyaa marka biyaha biyuhu u waraabiyaan dhulka hareeraha sida roobka. Hannaanku waa inuu socdaa ugu yaraan 1.5 saacadood. Haddii aysan jirin goob caafimaad oo wanaagsan ama biyo ah goobta, qashin aan ka yarayn 15 cm qoto dheer ayaa lagu soo jiidayaa geedka, halkaasoo biyaha lagu shubo.
Waraabin degdeg ah geedku wuxuu u baahan yahay guga iyo xagaaga. Xaaladdan, waqtiga iyo qiyaasta biyaha waxay kuxirantahay xaaladaha cimilada. Haddii roobabku caadi yihiin, waraabinta waxaa lagu fuliyaa heerarka 2-3 baaldiyadood halkii mitir labajibbaaran. Iyadoo la yareeyey roobabka, qiyaasta biyaha waa in labalabeeyaa.
Si aad uga sii qaadato qoyaanka iyo qaybinta hawada ka dib waraabka iyo roobka, ciidda ku wareegsan wareegga waa in la furo. Marka ugu horeysa waa 15 cm, kadibna 10 cm.
Bacriminta "Pear" "Marble" ayaa meel weyn ku leh beerista geedo khudradeed. Nidaamkani wuxuu kiciyaa koritaanka caleemaha, tirada iyo tayada taas oo kuxiran dhalidda.
Si kastaba ha ahaatee, arintan waa in si taxadar leh loo wajaho. Waqtiyada kala duwan ee xilli sii kordhaya, geedka waxay u baahan tahay noocyo kala duwan oo Bacriminta ah iyo inta jeer ee codsigooda. Xalka dhibaatooyinkan ayaa sidoo kale saamayn ku leh ciidda oo pear ku kora.
Inta lagu jiro muddada ubax, geedka waa in la taageeraa Bacriminta nitrogenous. Tusaale ahaan, Hure at heerka 100 g 5 litir oo biyo ah. Bishii koowaad ee xagaaga, carbamide waxaa loo isticmaalaa (50 g oo ah isla cabirka biyaha), iyo bishii labaad - sulfate potassium (100 g ee isla cabirka biyaha). 10 maalmood ka dib ubax, geed ayaa lagu buufin karaa 1% xalalka HOL, ka dibna mar labaad laba toddobaad kadib.
Ka dib markaan udubdhexaadin, Bacriminta dabiiciga ah waxaa lagu dhaqmaa: 2 kg oo ah digada, 5 kg ee compost ama kiilo shimbir shimbir ah halkii mitir, oo lagu qodo ciidda pristvolnym. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta Fosfateerka. Tiradooda waxay ku xiran tahay da'da geed. Dhirta dhalinyarada ilaa 12 jirka waxaa la siiyaa 6 g oo ah potassium iyo 4 g oo ah fosfooraska, qiyaasta dhirta illaa 20 sano jir ayaa korodhey 2 g. Da 'waaweyn oo ka weyn 20 sano waxay u baahan doontaa 12 g oo ah potassium iyo 6 g oo ah fosfooraska.
Ma taqaanaa? By muuqaalka geedka, waxaa suurtogal ah in la go'aamiyo dhar geedka hadda u baahan yahay. Sidaas, iyada oo la'aanta ah caleemaha fosfooraska ma horumariyaan sida caadiga ah, iyo caleemaha hoose hoos u dhaco. Dhibcaha caleemaha waxay muujinayaan la'aanta kalsiyum, iyo midabkooda midabka madow iyo xilliga hore ee fiiqu muujiyo la'aanta potassium. Haddii ay isdabajoogu u bislaadaan - si xun ayaad u dhaaftay nitrogen, iyo haddii caleemaha geedku ay yihiin cagaar iyo yar yar - waad ka xumahay.
Xilliga dayrta waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo bacriminta yaryar, laakiin keliya inta lagu jiro Sebtembar. Haddii kale, geedka uma diyaar garoobo dhaxan, taas oo ah, sida aan xusuusnayn, ayaa burburineysa.
Dhirta yaryar ee da'doodu ka yar tahay shan sano jir ayaa la quudin doonaa, adoo adeegsanaya bacrimin ku wareegsan wareegga wareegga saqafka. Kala duwanaanshahoodu waa geedo waaweyn oo dhererkiisu yahay 5 mitir.
"Mareeg" waa la sameeyaa si loo kiciyo dhismaha burooyinkeeda cusub. Waxay sannad walba ku qaataan guga. Ku bilaw nidaamka adoo ka jaraya laamood qalalan, ka dibna ka saar qaar ka mid ah laamood jir ah oo kaliya ka dib markii caleemaha yar yar waxaa lagu jarray by rubuc. Laamaha waaweyn waxaa lagu jarjiyaa sawir, iyo dhalinyaradu waa la gaabiyaa. Mid kasta oo xaleef ah waa in lagu nadiifiyo mindi fiiqan oo lagu daaweeyo rinjiga saliidda ama garoonka beerta.
Shuruudaha Bisaylkiisa iyo kaydinta beergooyska of pears "Marble"
Midhaha ugu horeysa ee geed ka mid ah noocyada kala duwan waxay bilaabataa kaliya 6 - 7 sano ka dib markii laga beerto. Goosashada mawraadku waxay dhacaysaa dhamaadka bisha Agoosto - bilowgii Sebtembar. Laakiin waxaad ka saari kartaa miraha iyo qaan gaadhin - ma ay luminayaan dhadhanka waxayna ku seexan karaan illaa bil. Iyadoo lagu naqshadeeyey fungicides, waxay jiifsadaan ilaa 60 maalmood. Si kastaba ha noqotee, haddii daryeelka geedku ahaa qalad, isteroberi ayaa dhici karta kahor.
Xaddiga beergooyska sidoo kale wuxuu si toos ah ugu xiran yahay inta najaariyuhu u hoggaansamayo sharciyada tiknoolajiyada beeraha. Haddii dhammaan hawlaha si sax ah loo fuliyo, qiyaas ahaan 230 sentar oo miro ah ayaa laga saari karaa hal hektar.
Ma taqaanaa? Goynta rikoodhka ah ee noocyada kala duwan ayaa lagu toogtay magaalada Rossosh, Voronezh. Ka dib 420 hektar ayaa laga saaray hektar.
Diirka diirka ah ee miro waxay ku siineysaa ilaalin mudda dheer ee muuqaalka ganacsiga. Dhibaato kuma lahan gaadiidka dalagga.
Diyaarinta "pearl" "Marble" jiilaalka
Geed khafiif ah ayaa u dhiman kara xitaa heerkulka 8 ° C. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la ilaaliyo nidaamka asaasiga ah adigoo daboolaya alaabta. Haddii pear ku kaco cimilada qabow, markaa tallaabooyinkan ilaalinta waa inay noqdaan qawaaniinta oo dhan inta uu nool yahay. Laga bilaabo inuu diyaariyo jiilaalka ayaa lagama maarmaan ah dhamaadka bisha Sebtembar. Tani, carrada agagaarka jirridda ayaa la qoday, la waraabiyey oo la daboolay jilif geedeed la jajabiyey, digada fardaha ama isku dar ah humus iyo peat. Lakabka walaxda ilaalinta waa inuu ahaado ugu yaraan 20 cm. Lakabka noocaan oo kale ah wuxuu badbaadin doonaa geedka ma aha oo kaliya xilliga jiilaalka laga bilaabo dhaxan, laakiin sidoo kale guga ka soo haray. Xilliga jiilaalka, waxaa habboon in la tuuro baraf badan oo ku wareegsan jiriga.
Waxaad isticmaali kartaa xargaha maskaxda ilaa dhererkeedu yahay 80 cm Wax kasta oo u oggolaanaya hawada inay u gudubto waa ku habboon tahay tan. Inta badan ujeeddooyinkan waxay isticmaalaan cirbadaha, kufilanaanta, cawska. Laakiin ku habboon iyo wargeysyada, kaarboorka, dharka suufka, mashiinka caaga ah.
Noocyo isdaba joog ah "Marble" cudurada iyo cayayaanka
Waxaa la rumeysan yahay in noocyada kala duwan ee pear adkaysi u cudurada fangas. Laakiin weli, waxaa lagu talinayaa in si joogto ah u baaro jirridda iyo taajka - cudurrada kale ayaa ka soo bixi kara geedka ama cayayaanka ayaa degi kara.
Cudurada ugu caamsan waxaa ka mid ah dhoobo, cytosporosis iyo kansarka madow. Cirridka cudurku wuxuu ku dhacaa caleemaha cagaarka ah ee cagaarka ah oo si dhakhso ah u dhici doona. Wakhti ka dib, oo tago midhaha. Waxaad ku dagaalami kartaa adigoo daaweynaya geedka "diyaarinta" nooca "80%" baaldi biyo ah (qiyaastii 4 litir oo xal ah ayaa loo baahan yahay geed kasta). Dhamaan caleemaha saameeyeen iyo isteroberi waa in la goosto oo la gubaa. Ujeedooyinka loo yaqaan prophylaxis, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo geedka ka hor xilli sii kordhaya iyo ka dib marka caleemaha Bordeaux dareere.
Qaladda jeermiska ama cytosporosis waxay inta badan ku dhacdaa xadgudubyada tiknoolojiyada beeraha ama miraayad ama gubasho. Waxaa muuqda qaabka mugdiga cas oo mugdi ah on jilif. Meelaha noocan oo kale ah ayaa la jarjiray mindi fiiqan, loola dhaqmo xal xabbad daroogada ah: 300 g oo ah lime iyo sulfate copper ayaa lagu qasi karaa baaldi biyo ah. Hal geed oo ku filan 3 litir oo xal ah. Si looga hortago cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero daacadnimada jilifka, oo caleemaha dhicid dayrta, ka saar laamaha qalalan.
Kansarka madow wuxuu marka hore u muuqdaa mid dhibco mugdi ah oo jilicsan oo leh xudduud leh oo cad oo ku wareegsan wareegga wareegga. Waxay si degdeg ah u koraan oo mugdi galaan. Waqti ka dib, dhibco casaan dhalaalaya waxay u muuqdaan midhaha. Miraha waa daaqsanyihiin, oo qallajinayaan. Marka cudurka la ogaado, dhibcaha waxaa lagu jaray qalab fiiqan, iyo jarista waxaa lagu daaweeyaa garoonka beerta ama 1% maadada bakteeriyada.
Waa muhiim! Marka cudur ama cayayaan lagu arkay mid ka mid ah geed, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fuliyo tallaabooyin daaweyn ah oo ku saabsan dhirta ku dhow. Tani waa habka kaliya ee lagu helo saameyn togan.
Wax yar oo muhiim ah waa ilaalinta isteroberi "Marble" ka soo cayayaanka. Badanaa, cayayaanka ku'saabsan, aboor ku'saabsan, iyo hawada ayaa ku nool. Ku saabsan ku dhaji yiraahdo barar yar oo caleenta ah. Cayayaanka ayaa hoos udhaca qaybta hoose, nuugaya casiirka, sababtoo ah caleemaha ayaa la qabsadaa oo dhaca. Waxaad la dagaalami kartaa mukhaadaraad "Envidor" ama "Vertimek". In baaldi biyo ah oo lagu qasi jiray 5 ml ee daroogada. Xalka ka dhalanaya waxaa lagu buufinayaa geedaha at heerka 3 litir geedka.
Грушевая плодожерка - это бабочка. Опасность представляют ее гусеницы, которые вылупливаются из яиц, отложенных на плоде, и поедают его. Борьба с ней представляет целый комплекс мероприятий. До цветения и после него дерево обрабатывают раствором "Агравертина" из расчета 5 мл на 1,5 л воды. 20 maalmood ka dib markii ubax isticmaalay "Kinmiks", iyo bil kadib markii ubax - "Iskra".
Haddii caleemaha on pear bilaabay inay cufan, waxaa ugu badan ee hawada u soo weeraray geed. Si loola dagaallamo, isticmaal Unobacterin, kicinta 50 g ee daroogada 10 litir oo biyo ah. Hal hal geed ah isticmaal 3 litir oo xal ah. Tallaabooyinka ka hortagga cayayaanka waa kuwo yar. Waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo oo lagu gubo caleemo dhaca dayrta.
Kiimiko "Marble" - waa runtii raadinaysa boorsooyin. Miraha la kariyey iyo midhaha jilicsan ayaa lagu kaydiyaa muddo dheer, iyada oo aan ku dhicin inay soo bandhigaan bandhiggooda. Laakiin geedka miro laftiisu waa mid naxariis badan, uma dulqaadan karo dabayl xoog leh iyo dhaxan. Waxay u baahan tahay ciidda gaarka ah, iftiin badan, dheecaan fiican iyo biyo badan. Waa muhiim in la hubiyo in qoyaanku uusan istaagin, geedna ma dhimanayo. Cayayaanka iyo cudurada sidoo kale waxay ku hanjabayaan isaga. Laakiin haddii aad raacdo dhammaan xeerarka teknoolajiyada beeraha, waxaad ka heli doontaa goosashada munaasibka ah ee isteroberi casiir leh.